Anthony Bergs's lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Anthony Bergs
Anthony dia mpitantana tetikasa ao Mpanoratra Isaky ny Adiny iray izay ampiasainy paikady samihafa sy manokana hanaparitahana tsara ny orinasan'ny mpanjifany. Tsy manam-potoana na fironana hanoratra ny taratasinao? Andramo ny serivisy fanoratana matihanina ary avelao hianjera amin'ny soroka ny lanjany! Hamonjy anao amin'ny laoniny sy ny fihenjanana mandritra ny ora maro izahay amin'ny alàlan'ny asa ataon'ny liona ho anao.
Talata, Desambra 13, 2016 Alarobia, Desambra 14, 2016 Anthony Bergs
Marketing automation dia teknolojia mahery vaika matanjaka izay nanova ny fomba fanaovana raharaham-barotra amin'ny marketing nomerika. Mampitombo ny fahombiazan'ny varotra izany ary mampihena ny overheads mifandraika amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy ny fizotry ny varotra sy ny marketing miverimberina. Ny orinasan'ny habe rehetra dia afaka manararaotra ny automatisation marketing ary mampitombo ny lohan'izy ireo ary koa ny ezaka fananganana marika. Maherin'ny 50% amin'ireo orinasa no efa mampiasa automatisation marketing, ary efa ho 70% ny ambiny no mikasa ny hanao izany